काठमाडौं । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता एवम् सांसद प्रदीप यादवले राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सांसद यादवले सांसद टेम्पो र माईक्रो बस चढेर संसद भवन जानुपर्ने अनि राष्ट्रपतिका लागि किन महँगो गाडी चाहियो भन्दै प्रश्न गरे । रिपोर्टस क्लबले आइतबार आयोजना गरेको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले पार्टीभित्र गुटबन्दी वढनुमा सभापति शेरबहादुर देउवा दोषी रहेको बताएकी छन् । सभापति देउवाकै कारण पार्टी कमजोर बनेको उनको आरोप छ । उनले भनिन्,‘उहाँले गरेका केही गल्ती र क्रियाकलापले त कांग्रेस धेरै कमजोर भएको छ । चुनावभन्दा
निर्मलाका बुवाआमासँग गगन थापाले भने,‘न्यायको लडाइँ जारी रहन्छ’
भीमदत्तनगर । नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ का १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। बुधवार बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझै मुलुकमा राजतन्त्र पुर्नस्थापना हुने खतरा जीवितै रहेको औंल्याएको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पार्टीले आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो खतरा औंल्याएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भारतमा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सत्ता र शक्तिको उन्माद भएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हुकुमी शासन’ गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा
काठमाडौं । नेवि संघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले समूहले तत्काल नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनको मिति तोक्न माग गरेको छ । सोमबार दिउँसो वाल्मिकी क्याम्पसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महामन्त्री काफ्ले निकट समूहले १२ औं महाधिवेशन तोक्न माग गर्दै आफ्नो आवाज कुल्चिएर अगाडि नबढन आग्रह गरेको छ । महामन्त्री
शक्तिशाली सरकारको कछुवा गति सुहाएनः अध्यक्ष राणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातन्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले शक्तिशाली सरकारको सुस्त गतिबाट जनता आजित भएको बताएका छन् । बडा दशै,तिहार,नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वका अवसरमा पार्टीले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चावहिलमा आयोजना गरेका चियापन तथा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सानेपामा कांग्रेसको चियापान कार्यक्रम शुरू
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैं,तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायत पर्वका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ । कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति बिमलेन्द्र निधि, महामन्त्री
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छठ पर्व सकिए लगत्तै सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । उनले भने,‘तिहार र छठलगत्तै आफ्नो पार्टीले सरकारविरुद्ध कडा
काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अब आफूहरूले नयाँ खालको क्रान्ति गर्ने बताएका छन् । बुधबार पार्टीको १५ औं संघीय वैठकको उद्घाटन गर्दै भट्टराईले तर त्यस्तो क्रान्ति सशस्त्र नहुने भन्दै फरक ढङ्गले जनयुद्ध गर्ने जिकिर गरे । राजनीति भनेकै संघर्ष भएको भन्दै भट्टराईले नयाँ शक्ति
कांग्रेसको चियापान कार्तिक १६ गते
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कार्तिक १६ गतेका दिन दसैं, तिहार,नेपाल सम्वत, छठ लगायतका पर्वको अवसरमा जलपान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कार्यक्रम पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरिने छ । गत वर्षहरुमा कोजाग्रत पूर्णिमामा गर्दै आएको चियापान कांग्रेस नेता चक्र बाँस्तोलाको
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। नेपाल तरुण दल स्थापनाको ६५औँ वर्षगाँठका अवसरमा आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुई
काठमाडौं । ६ वर्षदेखि मस्तिष्क घातबाट अचेत कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको शनिबार राति निधन भएको छ। उनको अन्तिम संस्कार आइतबार बेलुका गरिने भएको छ । तर, नेपाली काग्रेसले अहिलेसम्म बास्तोलको अन्तिम संस्कारबारे औपचारिक जानकारी गरेको छैन । बास्तोलाका स्वकीय सचिव रहेका राधाकृष्ण काफ्लेका अनुसार
गौर । स्वतन्त्र तराई–मधेसको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका सीके राउत पक्राउ परेका छन् । दुई कार्यकर्तासहित उनलाई रौतहटको गौर नगरपालिका भन्सार रोडबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीसँगै गौरका रामेश्वरप्रसाद यादव र महोत्तरीका सञ्जय स्वराजी पनि पक्राउ परेको रौतहट प्रहरीले बताएको छ । सीके राउतलाई राज्यविरुद्धको
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने,‘साथीहरुले आईजीपीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ, एकजना कर्मचारीलाई हटाएरमात्रै
आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै कांग्रेसको बैठक ३ दिन पर सारियो
काठमाडौं । शुक्रबार लागि तय गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठक तयारी नपुगेको भन्दै ३ दिन पर सारिएको छ। विधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको विधानमाथि आन्तरिक छलफल गर्नका लागि बैठक सारिएको छ । कांग्रेसले विधान संशोधनका लागि प्रदेशबाट आएका सुझाव र पछिल्लो समयमा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमका
काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३ औँ महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार स्वदेश फर्कदैँ छन् । प्रधानन्त्री ओलीसहित २१ जना उच्च पदस्थ अधिकारीको नेतृत्व गर्दै असोज ६ गते अमेरिका गएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार अपराह्न ३ः४५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय
जनता कांग्रेस नै ठिक भन्न थालिसकेःप्रकाशमान सिंह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले स्थिरता र शान्ति सुव्यवस्था दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को १० नम्बर इकाईद्वारा मंगलबार आयोजित चियापान तथा भेटघाट कार्यक्रममा नेता सिंहले भने,जनतालाई स्थिरता दिन्छु भन्ने सरकारको स्थिरता यही हो त ? दुई तिहाइ बहुमतको
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । बिहीबार संसदमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छौ कि केही किनारा लगाइदेऊ,’ भन्ने अवस्था आएको आएको बताए । कञ्चनपुर, रौतहटलगातका स्थानमा
महतोले औंला देखाउँदै भने,‘कुनै पनि बेला आन्दोलन हुन सक्छ’
वीरगन्ज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार विरुद्ध कुनै पनि बेला आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेसीलाई अधिकार दिने नाममा धोका भएको भन्दै कुनैपनि बेला राजपाले आन्दोलन गर्न सक्ने बताए । मधेसीको अधिकारलाई संशोधन मार्फत संविधानमा समावेश गर्ने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले जन विश्वास र भरोसालाई कत्तिपनि तलमाथि हुन नदिने बताएका छन् । वाम नेत्री साहना प्रधानको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसँग समृद्धिको
तोकिए नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र प्रमुख (यस्तो छ,सूची)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिव तय गरेको छ । वैठकले पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भागवन्डाका आधारमा पद बाँडफाँट गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश इन्चार्जमा एमाले नेताहरू वढी छन् भने अध्यक्षमा माओवादी
संविधानमा कतै छेउकुना नमिलेको र राँटो बाँकी भए समयक्रममा मिलाइन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धि राष्ट्रिय सङ्कल्प भएकाले सबै राजनीतिक दलका नेता र देशवासीलाई यस राष्ट्रिय दायित्वमा सहयोगी हुन आह्वान गरेका छन् । संविधान दिवस, २०७५ का अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा बुधबार नेपाली सैनिक मञ्च (टुँडिखेल) मा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकतालाई सृदृढ ढङ्गले सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अहिले पार्टीमा अन्तरविरोध खडा
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक संरचना तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा मुख्यरुपमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन
भक्तपुर । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय प्रणाली कागजमै मात्र लागु हुँदा जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले संबिधानमा उल्लेख भएको संघीय प्रणाली कागजमै सीमित बनेको र त्यसलाई दिमागबाट ब्यवहारमा लागू नगरिँदा
विपीको सपना पूरा गर्न कांग्रेस एकजुट हुनुपर्छःप्रकाशमान
वीरेन्द्रनगर । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीलाई क्रियाशिल बनाउन सबै एक जुट हुनको विकल्प नभएको बताएका छन् । विपी कोइरालाको १०५ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा सुर्खेत पुगेका नेता सिंहले एक आपसमा मिलेर अघि वढेमात्र विपी कोइरालाको सपना साकार हुने भन्दै कांग्रेस सशक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले बिमेस्टेक वैठकमा बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास गर्ने भनेर गरेको निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता रावलले संविधानको मर्मविपरित र राष्ट्रियताको
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निर्मला हत्या प्रकरणबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभामा जरुरी महत्वको विषयबारे बोल्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले निर्मला पन्तको वलात्कारपछि हत्या भएको १ महिना बित्न लाग्दापनि सरकारले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको
देउवाको प्रश्नः राज्य नै अपराधी जोगाउन लागेपछि कोसँग न्याय माग्ने ?
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई राज्य जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले नै दोषीलाई लुकाउन खोजे जनताले कोसँग न्याय माग्ने ? देउवाले प्रश्न गरे